Abahlali baseNdumo babelana umgodi wamanzi nezimfene | Scrolla Izindaba
Eminyakeni engamashumi amabili nesithupha yenkululeko, abahlali bendawo yaseNdumo ekwaMhlabuyalingana KwaZulu-Natali, namanje abanawo amanzi nogesi.
Leli dolobhana lakhiwe eduze kweziqiwi ezidumile ezinezilwane zasendle ‘ezinkulu ezinhlanu’ ezivakashelwa izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba.
Kepha amalungu omphakathi kufanele anqamule ehlathini eligcwele izimfene nezinyoka ukuya emgodini lapho bekha khona amanzi abo.
Kwividiyo eyabiwe ku-Twitter, isalukazi uChilizile Tembe utshele abezindaba i-1KZN ukuthi abakaze babe namanzi nogesi. Umgodi ukuphela kokufinyelela kwabo.
“Siyahlupheka ngenxa yalolu daba lwamanzi.
“Umgodi mkhulu kakhulu futhi kwesinye isikhathi sithola izinyoka lapho.
“Uzithola usuwela emgodini uma uzama ukubalekela izinyoka.
“Kwezinye izindawo abantu bathola amathangi amanzi – kodwa lapha awusoze wakubona lokho. Abanendaba nathi – ngisho nenduna, imeya noma amakhansela abasibheki nhlobo.
“Sivuka kusemnyama. Kumele uzokha amanzi cishe ngehora lesithupha ekuseni uphethe iziqukathi ezine.”
Abantu asebekhulile, abesilisa, abesifazane nezingane bakulesi sigodi bayabonakala beqoqa amanzi kule vidiyo begcwalisa amabhakede angama-litre angama-20 iskipa esisodwa ngesikhathi.
“Uzobuyela ekhaya ngabo-1 ntambama kanti uma uneziqukathi eziyisithupha zamanzi uzoshiya ngabo-3.”
UChilizile uthe ngisho nebhakede elingu-5 litre kuthatha isikhathi esiningi ukugcwalisa amanzi asemgodini.
“Kodwa bathi kumele sivote,” kusho uChilizile.